YEYINTNGE(CANADA): Sunday, April 14
ဓါတ်ဆီပုံးများဖြင့် ၀င်ရောက်ရန်ကြိုးစားသော ဘင်္ဂလီ ၅ ဦး
****** ထူးခြားသတင်း ******
-----------------------ဧပြီလ ၁၄ ရက် နံနက် ၇း ၃၀
မြောက်ဦးသို့ ဓါတ်ဆီပုံးများဖြင့် ၀င်ရောက်ရန်ကြိုးစားသော ဘင်္ဂလီ ၅ ဦးအား ယနေ့ည ၃ နာရီခန့်တွင် ဖမ်းဆီးရရှိကာ သက်ဆိုင်ရာသို့ အပ်
ဧပြီလ ၁၄ ရက်နေ့ နံနက် ၃ နာရီခန့်အချိန်တွင် မြောက်ဦးမြို့ သို့ ဓါတ်ဆီပုံး များဖြင့် ၀င်ရောက်ရန်ကြိုးစားသော ဘင်္ဂလီ ၅ ဦးအား သက်သေခံပစ္စည်းများ နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးမိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ ဘင်္ဂလီများသည် ပေါင်းတုတ်ကျေးရွာမှဖြစ်ပြီး ------ (ခ)ရွှေမောင်၊ ဖူတီယာ၊ အူတိန်မာမောက်၊ အဒူခေါ်ရိမ်(ခ)စံမောင်၊ အဒူချော်ဘီ တို့ဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါအမည်များသည် ဖမ်းမိသော ဘင်္ဂလီများ၏ ထွက်ဆိုချက်များသာဖြစ် သဖြင့် မှန်မမှန်ကိုမသိရသေးကြောင်းလည်းသိရသည်။ ယင်းတို့အား ဗန္ဒူလ တံတားအနီးတွင် တာဝန်ကျနေသော စစ်တပ်လက်ထဲသို့ အပ်နှံလိုက်ကြောင်း လည်းသိရှိရပါသည်။
မြောက်ဦးမြို့သို့ ၀င်ရောက်မီးရှို့ရန်အတွက် လာရောက်ခြင်းဖြစ်သော်လည်း စောင့်ကြည့်နေသူများက မြင်သွားသဖြင့် လူ အင်အားဖြင့် လိုက်လံဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် တောင်ပေါ်တစ်နေရာတွင် ဖမ်းမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း ဒေသခံများက ပြောပါသည်။
ထိုသို့ မီးရှို့ရန်ဝင်ရောက်လာသူများထဲတွင် အသက် ၄၀ ကျောက်အရွယ် ၂ ဦးနှင့် အသက် ၃၀ ၀န်းကျင် သုံးဦးတို့ ပါဝင်ကြောင်းလည်းသိရပါသည်။
သတင်းအပြည့်အစုံနှင့် ဓါတ်ပုံများကို ဆက်လက်တင်ပြပေးပါမည်။(RSV)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/14/20130အကြံပြုခြင်း
ယာဉ်တိမ်းမှောက် ...ကိုအောင်အောင်မှာ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံး
ရန်ကုန်-ပဲခူး လမ်းမပေါ်တွင် ဆလွန်းကားတစ်စီး အရှိန်လွန် ယာဉ်တိမ်းမှောက်
ဧပြီလ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ်အချိန်တွင် ရန်ကုန်-ပဲခူး ကားလမ်းမ မိုင်တိုင် ၃၈/၅ အနီးတွင် ယာဉ်မောင်း ကိုအောင်အောင် (၂၃ နှစ်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့) မောင်းနှင်လာသည့် ဆလွန်း ကား အနက်ရောင်တစ်စီးသည် အရှိန်မထိမ်းနိုင်ဘဲ လမ်းလယ်ကျွန်း အား ဝင်တိုက်ကာ တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကြောင့် ယာဉ်မောင်း ကိုအောင်အောင်မှာ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးခဲ့ပြီး ယာဉ်ပေါ်ပါသူ မသဇင်ဖြိုး၊ မဝါဝါဝင်း၊ ကိုထွန်းဇော်တို့မှာ ဒဏ်ရာများ အသီးသီးရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြစ်မှုဆိုင်ရာပုဒ်မ ၃၀၄ (က) ၃၃၇/၃၃၈ ဖြင့် အမှုဖွင့် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အင်းတကော် စခန်းမှူး ဒုရဲအုပ် ဦးသန်းစိုးက ပြောကြားခဲ့သည်။ Eleven Media Group
Tun Win Tun's photo.
အဲဒီကားအကောင်းလေးတွေမှာ ပါလာတဲ့ လူအတော်များများကို စိတ်အနှောက်အယှက်အပေးဆုံးအရာကတော့ ခါးပတ်မပတ်လို့ သတိပေးနေတဲ့ မီး နဲ့ တတီတီမြည်နေတဲ့ အသံပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကလဲကားပေါ်ကခါးပတ် (seat belt) ကို ကားဘယ်နှစ်ခုနှစ်က ထုတ်တယ်ဆိုတာသိရုံလောက်ကြည်ဖို့ပဲ စိတ်ဝင်စားခဲ့တာလေ။ အဲဒီတော့ ဒီမီးလုံးလေး နဲ့ တတီတီမြည်သံ ကကားမောင်းနေတုံး တော်တော် စိတ်အနှောက်အယှက်ပေးတော့တာပေါ့။
အဲဒီမှာမြန်မာလူမျိုးပီပီ မီးလုံးနဲ့အသံကိုပျောက်အောင် အသုံးပြုရမဲ့ကိရိယာကိုရှာဖွေတော့တာပါပဲ။ ထုံးစံအတိုင်း အိမ်နီးချင်းကောင်းတို့က ပုံမှာပါတဲ့ angry bird အရုပ်တပ်ထားတဲ့ ခါးပတ်ခေါင်းအတုလေးတွေကိုတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။
အဲဒါလေးတွေကို seat belt receptacle မှာတပ်လိုက်ရင် သင့်ကို စိတ်အနှောက်အယှက်ပေးနေတဲ့ မီးနဲ့အသံက ပျောက်သွားပြီလေ။
ဒါပေမယ့် အဲဒါကသင့်ကိုသေမင်းဆီကိုမြန်မြန်ပို့လိုက်တာပါပဲ။ ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့ရင် သင့်ကိုအသက်ဘေးမှအများဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်တာ အဲဒီ ခါးပတ်ပါ။ ဒီခါးပတ် ပတ်ဖြစ်အောင်လို့ ဥပဒေအရ သာမက ကားထုတ်လုပ်သူများကပါ အဆင့်ဆင့် အသိပေး၊ သတိပေးနိုင်ဖို့ ဒီ မီးတွေ အသံတွေ ကို ငွေကြေးအကုန်အကျခံ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားတာပါ။ဒီကုန်ကျစားရိတ်ကိုလဲ သင် ပေးထားပြီးပါပြီ။ ဒီစနစ်ကို လိမ်လည် လှည့်ဖျားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်သေတွင်းကို တူးနေသူကသင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသတိရလိုက်ပါ။
ပိုပြီးဥာဏ်ပညာကြီးသူတွေကတော့ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ မီးလုံးကျွမ်းသွားမှာစိုးလို့ပါတဲ့။
ဒီမီးတစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ သင့်အသက်တစ်ချောင်းတန်ဖိုးကိုတော့ သင်ချိန်ဆနိုင်မှာပါ။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ ဘယ်ဥာဏ်ကြီးရှင်ကပြောသည်မသိ ဒီမီးလင်းနေရင် ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ချိန်မှာ air bag မပွင့်ပါတဲ့။
Air bag နှင့်ယှဉ်ရင် seat belt က သင့်အသက်ကို ပိုပြီးကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်ချိန်မှာ air bag ပွင့်မယ် မပွင့်ဘူး ဘယ်သူကမှ အာမခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပွင့်ခဲ့ရင်တောင်မှ သင်ဟာ seat belt တပ်မထားခဲ့ရင် အနေအထားမမှန် တဲ့အတွက် လုံလောက်တဲ့ ကာကွယ်မှုကို မရဘဲ အခြေအနေပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။ seat belt ကတော့ သင်တပ်ထားရင် သင့် ကို အချိန်ပြည့်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတာကတော့ ကျွန်တော့ထက်အတွေ့အကြုံများတဲ့သူတွေရဲ့ကားတွေမှာတောင် အဲဒီ ပစ္စည်းလေးတွေတပ်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရလို့ပါပဲ။သူတို့ဟာ ရန်ကုန်မြို့တွင်း သာမက နေပြည်တော်အမြန်လမ်းပေါ်မှာပါ မိသားစုကိုတင်ပြီးအကြိမ်ကြိမ်သွားလာနေကြဆဲပါ။
သင်ဒီစာကိုဖတ်ပြီးချိန် သင့်ကားထဲမှာ ဒီလို ပစ္စည်းမျိုးရှိနေရင် ဘယ်လောက်ပဲ ပေးခဲ့ရပါစေ လွှင့်ပြစ်လိုက်ပြီး ခါးပါတ် seat belt ကိုသာပတ်ထားလိုက်ပါ။
ကားမောင်းနေစဉ် ခါးပတ်ပတ်ထားရတာ မလွတ်လပ်ဘူးလို့ယူဆတဲ့သူတွေကို လဲသဘောတူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်အသက်နဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင်တော့အဲဒီ မ လွတ်လပ်မှုဆိုတာပြောမပလောက်ပါဘူး။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/14/2013 1 အကြံပြုခြင်း
ဆော်ဒီ အာရေဗျာ နိုင်ငံ ဂျဒ္ဒားမြို့ တွင် ၀ါကာအူဒင်သွေးထိုးလှုံဆော်
ဆော်ဒီ အာရေဗျာ နိုင်ငံ ဂျဒ္ဒားမြို့ တွင် ယနေ့ ကျင်းပသောတူရကီ၊ အာဖဂန် နစ္စတန်၊ ယူအေအီး၊ ဘရူးနိုင်း၊ ဂျီဘိုတီ၊ အင်ဒို နီးရှား၊ မလေးရှား၊ အီဂျစ်၊ ဆီနီ ဂါလ် နှင့် ဆော်ဒီ အာရေဗျာ နိုင်ငံ များမှအစ္စလာမစ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရေးအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ များ၏ နိုင်ငံ ခြားရေး ၀န်ကြီးများ အစည်း အဝေးတွင်ကုလမှ
မြန်မာနိုင်ငံကိုအရေးယူဖို့တင်ပြပေးရန်အမေရိကားအခြေစိုက်ဘင်္ဂလီ (Wakar Uddin)၀ါကာအူဒင်သွေးထိုးလှုံဆော်နေစဉ်..
ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာလည်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက လူစုံတက်စုံရောက်
(Credit:Data Research Group)
ဒီနေ့ ချောင်းသာ လာတဲ့ ကားတစ်စီး ချောက်ထဲ ထိုးကျကျား/မ ၁၈ ဦး ဒဏ်ရာရပြီးသေဆုံးမရှိ
“ မနက်ဖြန်( ၁၅-၄-၂၀၁၃)မှာ Time မဂ္ဂဇင်းတွင် အမေစုအတွက် Vote ကြစို့ ”
The Myanmar People's photo.
“ မနက်ဖြန် ၁၅-၄-၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် Time မဂ္ဂဇင်းက
အတွက် ဒီမိုကရေစီနှင့်တရားမျှတမှု( Icon )
( Larry Page )ကို အပြိုင်ရွေးချယ်ဆန္ဒမဲ( Vote ခိုင်းပါမည်။
များအနေဖြင့် မိမိတို့နိုင်ငံမှ မြန်မာ့မိခင်ကြီးအတွက် - ဆန္ဒမဲ
( Vote ) နိုင်ကြရန် ကြိုတင်အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။
15.4.2013 ( Monday ) - Tomorrow
Daw Aung San Suu Kyi ( Icon)
............. Vs ..........
Larry Page ( Technology )
Go & Vote there (at Tomorrow ):
( http://time100.time.com/2013/04/09/face-off-whos-the-most-influential-icon/ )
ကျိုတိုမြို့ ပေါ်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်လေ့လာနေစဉ်။ 14.4.2013
ကျန်တာအားလုံးကြိုက်တယ်၊၊ကချင်မှာ ပစ်လိုက်တဲ့ကျည်ဆန်ခွံတွေ ပြန်ကောက်ရောင်းပြီး ဆောက်ဆိုတာလောက်နဲ့အချိန်ကုန်ခံ ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တက်မပြောသင့်ဘူး၊၊ ဒါ Constructive Criticism မဟုတ်ဘူး၊၊ Practical Advice မဟုတ်ဘူး၊၊
တာPractical Advice မဖြစ်လာဖူးလား။ဆောင်းပါးထဲဒီလိုအရှည်
ဆန္ဒဆိုတာကိုက Practical Advice မဟုတ်ဘူးဗျ၊၊ကမ္ဘာမှာ စစ်ပွဲမရှိတဲ့နိုင်ငံပြော၊၊
Thurain Nay Myo
နိုင်ငံအတွက် စာတွေနဲ့ ဝေဖန်ရေးလုပ်နေတာနဲ့လောက်တော့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးက ပြည်သူတွေ သွားရေးသာပြီး လာေ၇းမဖြောင့်ပါဘူးခင်ဗျာ။ နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့သူတွေ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အခွန် တာဝန်ကျေပွန်ရဲ့လား
နိုင်ငံခြားကနေ ဝေဖန်နေတာ၊ အကြံတွေ ပေးနေတာက လက်တွေ့လုပ်ရတာလောက်
မလွယ်ဘူးဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာလုပ်ကြည့်ကြပါဦး
ရန်ကုန်လောက် နေပြည်တော်လောက် တိုးတက်နေတာထက် နိုင်ငံအနှံ့တိုးတက်စည်ပင်
လာဖို့ တာဝန်ကျေတဲ့အခွန်ထမ်းတွေရဲ့ရငွေအပေါ် မူတည်ပြီး လုပ်နေရတယ်ဆိုတာ
economic imperialism မဟုတ်ဖူးဖြစ်အုံးမယ်။နည်းပညာရောင်းစားဖို့ကတော့
Min Lwin Maung
တခါထဲပြောလိုက်မယ် ။အိမ်တွေ အလုပ်၇ုံးတွေ လမ်းတွေ ဆိုင်တွေ တနေ၇ာစုဝေးနေတဲ.
အတွက် လမ်းကတေါ. ၂ ထပ် တံတားဆေါက်ဆေါက် ၃ ထပ်တံတားဆေါက်ဆေါက်
ကြပ်နေမှာဘဲ .တနေ၇ာထဲကို ဦးတည်ပြီးစုသွါးနေလို.ဘဲ..... နေ၇ာတွေ ၇ှိပါတယ်..
စာတစ်လုံးဝေသွားတာနဲ့ ရဲရဲ လဲ လက်ကိုမလည်တော့ဘူး။ သနားပါ့
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/14/20132အကြံပြုခြင်း
ဓါတ်ဆီပုံးများဖြင့် ၀င်ရောက်ရန်ကြိုးစားသော ဘင်္ဂလီ ၅...
ယာဉ်တိမ်းမှောက် ...ကိုအောင်အောင်မှာ ပွဲချင်းပြီးေ...
ဆော်ဒီ အာရေဗျာ နိုင်ငံ ဂျဒ္ဒားမြို့ တွင် ၀ါကာအူဒင်ေ...
ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာလည်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက လူစုံတက...
ဒီနေ့ ချောင်းသာ လာတဲ့ ကားတစ်စီး ချောက်ထဲ ထိုးကျကျာ...
“ မနက်ဖြန်( ၁၅-၄-၂၀၁၃)မှာ Time မဂ္ဂဇင်းတွင် အမေစုအတ...
ကျိုတိုမြို့ ပေါ်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်လေ့...
(Registration Closed)Lecture given by Daw Aung San...